Ethiopia: #Ummanni Bu’aa bubuutuun sobamu hin jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsEthiopia: #Ummanni Bu’aa bubuutuun sobamu hin jiru.
Wanti guyyaa har’aa Muumichi minesteraa duraanii Abiyyii Ahimad Alii godhan bu’aa Siyaasaa Qofaafi!
what Former prime minister Abiy Ahmed Ali done is just for political business.
የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አሊ ያደረጉት ለፖለቲካ ንግድ ብቻ ነው ፡፡
Isaa kaan maatii malee hanbisaa isaa kaan kunoo akkanatti gudisaara jedhanii ibsachuun, dhuguma dirqama lamummaa bahachuu osoo hin taane, ani nama akkanaatii na argaa naaf argaa dha. dhuguma Onnee irraa yaade yoo ta’e yeroo isaa eeggatee mumul’isuun irra hin jiraatu.
Suuraan daa’ima Abbaa malee haftee kun Kiibxata darbe, 27, 4, 2021 Abba ijoollee 4 durba lamaa fi dhiira lamaa miseensa ABO Boonsaa/ Abdallaa Amaan Loltoonni Biltsiginnaa mana jireenyaa isaatii fuutee ajjeesuun Bosonatti gattee dha; kun fagoo miti seenaa guyyota 5 duraati.
Mee ilmaan maatii malee guddataartu meeqa keessantuu beeka? suuraa isaanii maxxansaa maqaa waliin!
kun Rabboomaaf, namummaan itti dhagahamee hojii akkasi hojjate osoo hin taane duruma qindaawaa dha. waan dantaa polotikaaf jecha itti yaadamee godhamee dha.
Qabamuun Jaal Daawud gaaffii Hangaasa Ibrahimf deebi kennuf ture.
Seeraatti nuuf dhi’aatuu jedhe gaafataa ture.
Dhugaan Ifa Baate
Iccitii Biraanuu Naggaafi Abiy Ahmed Ali beektuu..? Iccitii isaanii arganneerra dubbiffadhaa Waliif qoodaa!!
Abiy bara waayyaanee irraa eegalee dhooksaan miseensa G7 ta’uu isaa odeeffannoon Iccitii miliqee nu dhaqqabe ni addeessa
Bara waayyaanee Magaalaa Asmaraatti Biraanuu Naggaafi Abiyi bilbilaan dhooksaan yaada waljijjiiraa turan. Abiy seera shoororkeessummaa wayyaaneen ABO, G7, WBOfi Jawar Mohammed dabalatee qabsa’oota irratti labsite wanti akka kaafamu godheef Biraanuu Naggaa (G7) irraa shoororkeessummaa kaasee gara biyyaa galchuufi malee paartiilee fi Qabsa’oota biroo irratti deebisee shoororkeessummaa labsuuf akka karoorri ture odeessi miliqee dhufe kun ni addeessa. Amma immoo nama qalbii qabuuf wanti hundi ifa galaadha.
Biraanuu Naggaa Abiyyiin yoo G7 filannoo injifanne hogganaa keenya si goona jadhee waadaa galeefi jira. Kanaaf jacha Abiy paartiilee hunda akka filannoo keessaa dhiibamanii bahan godhe! G7 paartii dhooksaan waadaa waliif galan waan ta’eef akka barbaadanitti akka biyyatti keessa sochoo’an haala kan mijjeessaa jiruuf mataa Abiyyiti. Abiy kaayyoon isaa inni guddaan aangoodha. Kanaaf jacha waadaa G7 irrattis hoogganaa ta’uu akka qabufi waadaa isaafi Biraanuu Naggaa akka ta’e ummatni Oromoo beekuu qaba ummaaf maxxansi